बिमस्टेकमा नेपालले कस्तो भुमिका देखाउला ? - अर्थ र विकास | Kantipur TV HD
बिमस्टेकमा नेपालले कस्तो भुमिका देखाउला ?
अध्यक्ष राष्ट्रका हिसावले बिमस्टेक चौथो शिखर सम्मेलन नेपालले आयोजना गर्दैछ । संयोग नै मान्नु पर्छ, नेपाल अहिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन सार्कको पनि अध्यक्ष राष्ट्र हो । सार्कका ८ सदस्यमध्ये ५ वटा मुलुक बिमस्टेकमा पनि सदस्य छन्। २ बर्षअघि नै पाकिस्तानमा हुने भनिएको सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन भारत-पाकिस्तान सम्बन्धकै कारण अनिश्चित बनेको छ । अधिकांश सार्क राष्ट्रका नेताहरुको समेत उपस्थिति रहने बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपालले सार्कको गतिशिलताका लागि कस्तो भुमिका देखाउला ?
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले आईतबारको संसद बैठकमा सार्क र बिमस्टेकको नेतृत्व गरेको आधारमा यि संगठनप्रति नेपालले दायित्व पुरा गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिए ।
दक्षिण एसियाली र दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुक जोड्ने संयन्त्र बिमिस्टेक र सार्क दुबै प्रभावकारी बन्दा मात्रै नेपालले आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष मार्फत लाभ उठाउन सक्छ । पर्यटन, उर्जा, व्यापार र यातायात यसका सम्भाव्य क्षेत्र हुन् । तर यसका लागि न्युनतम आधारभूत क्षेत्रमा समेत उलेख्य उपलब्धी हुन सकेको छैन ।
पाकिस्तानसंग सम्बन्ध बिग्रिएको र यस क्षेत्रमा बढ्दो चिनिया प्रभावप्रति सशंकित भारत सार्कलाई प्रभावहिन बनाउने र बिमस्टेकको प्रभाव बढाउनेतर्फ अग्रसर रहेको टिप्पणी सामरिक मामिलाका जानकारहरू गर्छन् । भारतको यही रणनितिको प्रभावमा परेर सार्कप्रतिको दायित्व नेपाल लगायत अन्य सदस्य राष्ट्रले बिर्सने त होईन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । यस्ता आशंका मेटाउने काम भने सार्कको सक्रियताले मात्र गर्नेछ ।